ပြည်တော်ဝင်ခွင့်စောင့်နေသူ(သီဟသူမင်းသား/မင်းခွေးချေး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ပြည်တော်ဝင်ခွင့်စောင့်နေသူ(သီဟသူမင်းသား/မင်းခွေးချေး)
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Sep 11, 2011 in Cultures, History | 17 comments
စိတ်ဝဋ်ဥာဉ်ကြားက လွင့်နေတဲ့ဝိဥာဉ်ကိုစုစည်း အသေအချာ
တယ်…….ပြတ်သားတဲ့ အသံပါ ဆွေးနွေးနေကြတဲ
“နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာတွင် ပြုလုပ်သော
စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ အသင်းအဖွဲ့ပေါင်းစုံမှ
တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံရာတွင် ဦးသိန်းစိန်က ၁၉၈၈
ခုနှစ် နောက်ပိုင်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်
ပြည်ပရောက်အတိုက်အခံများအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အမိနိုင်ငံသို့
ပြန်လာ၍ရကြောင်း ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိနေသူများကို ပြန်လာခွင့်ပြုသည်ဟု
အဖွင့်မိန့်ခွန်း၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့သည် တဲ့နောက်ပြီး
ရှိပါသေးတယ်… အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လည်း မဟုတ်သော “ နိုင်ငံတော်
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြန်လာ လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြဖို့ရန်”
ဖိတ်ခေါ်မှုတွင် ပြန်သွားလိုသူများနှင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေသူများ
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများထံတွင် “ အမြန်ဆုံး
လာရောက် လက်နက်ချနိုင်”သည်ဟု အဆိုပါ မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြားသည်တဲ့ ..“
“ရွှေဘိုနန်းတော်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်ကိုအကြီးစားပြင်ဆင်နေပြီတဲ့ ……”
အဲသလို..မယုံတယုံ ဖြစ်အောင်လဲ …….. ကျုပ် စောင့်စားရတဲ့နှစ်တွေ
အပြင်ဘက်ကအချင်းချင်ပြောဆိုသံ…ဝေဖန်သံ ၊အငြင်းပွားသံ တွေ က အုတ်နံရံ
ကိုထွင်းဖောက်.. ဟိုး…..မြေအောက် တိုက်ခန်းလေးထဲ
့လား… ……ကျုပ် ရင်ထဲ က ၀မ်းနည်းခြင်း ကြေကွဲခြင်း ၊နာကြည်းခြင်း
တွေပြည့် နေပါရော ……….
သံတမာန် ရှေးဟောင်းကျောက်စာ သုတေသနအဖွဲ့ နဲ့ အတူ သုတေသန ပညာရှင်
ဒေါက်တာဂျွန်ဘီဒင် အပါဝင်ေ၇ာက်ရှိလာကြပါတယ်…။သူ အပြန်မှာတော့
မြန်မာပြည်တော်ပြန် လက်ဆောင်အနေ နဲ့ တွံတေးက စဉ့်အိုးကြီးတစ်လုံး ကို
ကောက်ရိုး အထပ်ထပ်ရစ်ပတ်ပြိး သယ်ယူသွားခဲ့ တယ်.။
.သူအပြောကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ လက်ရာပြောင်မြောက်တဲ့ စဉ့်
က သံတမန် လာရောက်တဲ့ သူ ဖြစ်နေတာကြောင့် စစ်ဆေးခြင်းမရှိ သယ်ဆောင်
ခွင့်ရခဲ့ တယ်။။ တွံ့ တေးစဉ့် အိုးဆိုတာ…မြန်မာလူမျိုးတို့ ရဲ့ အံ
့မခန်းလက်ရာပါ..အိုးထိန်းသည်ရဲ့ စိတ်ကူး…နွဲ့ နှောင်းတဲ့ 
ကျောက်သလင်းသားလို အရည်သွေးကြောင့် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ တာပါ။ကျုပ်တို
့မြန်မာတွေ ကနေ့ စဉ်မြင်တွေ့ ရလို့ သာ တန်ဘိုးမထား ကြပေမဲ့ ..
.နိုင်ငံခြားက လူတွေအတွက်တော့ မြင်ရခဲတဲ့ အနုပညာ လက်ရာပါဘဲ။
အရိမဒ္ဒနပူရပုဂံပြည်က ဘိုးတော်လောင်းကျန်စစ်သားဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ ခန်
့ထည်သော မီးတား မဟာရာဇ်တံတိုင်းကြီး၏အတွင်းက အာနန္ဒစေတီ ကဆည်းလည်းသံကို
ဆွတ်ပျံလွမ်းမော မိပါတယ်။ တမဒီပမြို့ရိုး အရှေ့ ဘက်သရပါတခါးအနိးအရှေ
အနောက်ဘက်က စစ်ရေးလေကျင့်ကွင်းက တံပိုးသံ၊ စည်သံ၊ လွှားသံ၊
အဲမောင်းသံတွေ..ရာပေါင်းများစွာသော စစ်သည်တော်မြင်းသည်တော် တို့
စစ်ရေးလေ့ ကျင်နေပုံ ၊အင်တိုက်အားတိုက်စစ် သွေး စစ်မာန်
ကြွေးကြော်သံတွေဟာ…ကျုပ် ရဲ့ အမြင်အာရုံနဲ့ နားမှာ မနေ့ တနေ
့ကလိုဘဲကြားယောင်ဆဲ…မြင်ယောင်ဆဲ .အရာရာဟာ…မနေ့ တနေ့ ကလိုပါဘဲလား…………။
ကျုပ်ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေတာပ…အရိမဒ္ဒနပူရ ပုဂံထိးနန်းရဲ့ မြပုခက်
မဟာဆိမဟာသွေး ပီသစွာကြိးပြင်းခဲ့ ရတဲ့ ကျုပ် ၊
ပ၀ရ ဓမ္မရာဇာ ဒါနပတိနရ သိဃ်ဥစ္စနာ” မင်းဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ 
ဘုရင်မင်းမြတ် နဲ့ မယ်တော်ကလွဲ ရင် ဘယ်သူ့ ကိုမှ မျက်စိထဲ ရှိတယ်မထင်ခဲ
့တဲ ရာဇဂုဏ်မောက်မာလွန်းတယ်လို့အများကသိကြတဲ့့ကျုပ်၊
ပုဂံပြည်ရဲ သြဇာကတိမအရှိဆုံး အသက်အကြီးဆုံး သက်တော်ရှည် အမတ်ကြိး ပညာရှိ
မိခဲ့ ဘူးတဲ့ ကျုပ်………..။
ကျုပ် ကလည်း ကျုပ် ပါဘဲ…အသက်ကလည်း၂၀နှစ် မပြည့်တဲ
့အရွယ်….မင်းပျို မင်းလွင်လေး ။ပြိးတော့ အိမ်ရှေ့ စံနန်းလျာ
မင်းတစ်ပါးနန်းရင်ပြင်တခုလုံး ထောင်လွား သောက်စားမော်ကြွားခဲ့ မိတဲ
တိုင်းပြည်ရေးရာ ညီလာခံတက်ဘို့ နန်းရင်ပြင်ထဲ ခြေသံလုံလုံနဲ့ဝင်လာတာကို
တိုင်မှီပြိး ညီလာခံ လျောက်တင်စရာ ကို စဉ်းစားနေတဲ့ကျုပ်
အဖိုးလောက်ရှိတဲ့ အမတ်ကြီး ကို… ကျုပ်ဝင်လာတာ မမြင်ရကောင်းလား ဆိုပြိး ၊
ကွမ်းတံတွေး နဲ့ ထွေးမိတာကို.. အငြိုးထားပြိး မင်းနေပြည်တော်နဲ့ ဝေး
ကွာနေတဲ့ တွံ တေးတောတန်း တစ်နေရာမှာ… ရာဇသင်္ကြန် အမတ်ကြီး နဲ
့ပေါင်းပါတွေ က အငြိုးထား အကောက်ကြံ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ ရတဲ့ 
ဒီအမတ်ကြီးက ဥပါယ်တံမျဉ်နဲ့ .“.အရှင့်သားဘုန်းကံကြောင့် တွံတေးတောတန်းထဲ
ကဆင်ဖြူတော်ကိုအရှင့်သားကိုယ်တိုင်ရှု စား ကျော့ယူသိမ်းသွင်းပြီး
ဈာပနာအရေးပြိး မှ ထီးနန်း သိမ်းမြန်းပါ ၊စိုးစံတော်မှုပါ ……………….“
အကြံပေးလို့ ကျုပ်ရဲ့ မြလက်စွပ် ကိုတောင် အမတ်ကြိး ရာဇသင်္ကြန်ကို.. ဆု
အဖြစ် ချိးမြှင့်ခဲ့ သေးတာ က အစ…….ကျုပ်မှတ်မိနေပါသကော…………………..
အတတ်တွေနဲ့ … ကျုပ်ကဘ၀ချုပ်ငြိမ်း ဆေးစီိရင်ပြီိးဒီိရာဝင်အိုးထဲ
ဆေးရည်စိမ် ခြင်းခံခဲ့ တဲ့ ကျုပ်…..ကျုပ်ဟာ ..ဒေါက်တာဂျွန်ဘီဒင်ဆိုတဲ
့အိမ်အောက်ထပ်ကမြေအောက်ခန်းထဲ မှာ….ထားပြီး..။ ကျုပ်ကို စဉ့်အိုးထဲ
ကထုတ်ပြိး ကျောက်ညိုစားပွဲ ပေါ်က ၆ပေ ရှည်မှန်ခေါင်းထဲ ပြောင်းထဲ
“ကျုပ်ရဲ့သွင်ပြင် ကိုပြောပြအုံးမယ်..မဟာဆီမဟာသွေးကြီး ပြင်းခဲ့ ရတဲ့ ကျုပ်၊
ကျုပ် အသားရေကရွှေလိုဥ၀င်းနေတယ်။ မျက်နှာကနှုတ်ခမ်းမွှေးရေးရေး နဲ့ ခေါင်းက
ယောင်တစ်စောင်းထုံးထားတယ် ကေသရာဇာခြင်္သေ့ မင်း ပါတြ့ ငွေချည်ဖောက်
ရွှေဖလားရောင်ဖဲ ပုဆိုးနဲ့မျက်နှာက တခုခုအလိုမကျဟန်အံ
အံ့သြ ထူးဆန်းစွာဖြစ်ပြိး ကျုပ် ဘေးနားက…တခြား အီဂျစ်နိုင်ငံက
မံမီရုပ်အလောင်း ကို ကိုင်လိုက်… .ကျုပ် အသားအရေ လာကိုင်လိုက် ၊ပြီးးတော
့ကျုပ်ရဲ့ ခေါင်းနံဘေးမှာပုဂံမင်းသား ၊သီဟသ၊ူပုဂံခေတ၊မြန်မာနိုင်ငံ၊၁၂၄၅
တနေ့ တော့ဒေါက်တာဂျွန်ဘီဒင်ရဲ့ မြေအောက်ခန်းထဲ ကို
၀တ်ထားပေမဲကျုပ်ရဲ့နှလုံးသွေးးကသိနေတယ်..စကားပြောတတ်လေ… သူ့ ရဲ
လောက် ကျုပ်ရဲ့ ကြည်နူးနေမှုကို မပြောပြတတ်အောင်ပါဘဲ… အဲ့ ဒိဧည့် သည်ဟာ..
ကျုပ် ကိုထည့်ထားတဲ့ မှန်ခေါင်းနဲ့ ဘေးကစာတမ်းကြည့်ပြိးမျက်ရည်စို
့နေတယ်ဆိုတာ နှလုံးသွေးတူတဲ့ ကျုပ်တွေ့ လိုက်ပါတယ် ။
ကျုပ်ရင်ထဲ က လာတဲ့ စကားတွေ ကိုလည်း ဒီမြန်မာ ဧည့်သည်ရဲ့ ရင်မှတဆင်
ကြားရမယ်ထင်ပါရဲ့ ၊့ ဒီမြန်မာ ဧည့်သည်ရဲ့ ရင်မှတဆင့် သူမျက်ဝန်းက
၀မ်းနည်း မှုတွေ ဟာ..ရင်ထဲ မှာလှိုက်ကြွေးငိုနေပြိလားလို့ထင်မိပါတယ်.။
.ပြိုတော့မဲ မိုးလို သူ့ မျက်နှာအရိပ်အကဲ ဟာ..အချစ်ရဆုံး..
တန်ဘိုးအထားရဆုံးအမြတ်နိုးဆုံးကို.. မမျော်လင့်ပဲ တွေ့ ရတဲ
့အခိုက်ဝမ်းနည်းမှုမျိုးတွေပါ…။ သူ့ ရင်ထဲ ကအသံတိတ်ပြိးဖတ်နေတဲ့ …. .သူ
အလောင်းပကတိအတိုင်းစိရင်ခြင်းအတတ် ရှေးမြန်မာတို့ တတ်မြောက်ခဲ့ တယ်
ဆိုတာ.သိရလို့ အံ့သြတနန်း ဂုဏ်ယူမိတဲ့ သူ…….. .သူက အိုင်စီအက်စ်ဦးသြဘာ
မြန်မာတို့ ရဲ့ နှစ်ပေါင်း အတိအကျပြောရရင် (၇၁၁) နှစ် အထိ မပုတ်မသိုးပဲ
မူလအတိုင်းရှိနေတဲ့ ပုဂံ မင်းသားရဲ့ ရုပ်အလောင်း ဆေးရင်စီိခြင်းအတတ်ကို
နှောင်းလူ မြန်မာတွေ သန်းပေါင်း များစွာသော..မြန်မာတွေ မသိသေးဘူး…. ။.
ပြီးးတော့ ကျွန်နော်တိုတွေ့ က ကမ္ဘာကိုတင်ပြချင်သေးတယ်။ အီဂျစ်လူမျိုးတွေ
ဘဲ စိရင်တတ်တယ်။ ရှေးတရုပ်လူမျိုး တွေဘဲ တတ်တယ် ထင်နေတာလေ။
့နိုင်ငံကခိုးယူသွားတဲ့ဒီမင်းသားရုပ်အလောင်းနဲ့ စဉ့်
အိုးကြိးပါသက်သေပြတဲ့ အနေနဲ့ ယူသွားရမယ်..။”
“အိုး……….ဥိးသြဘာ ခိုးတယ်လို့ မပြောပါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ညံ့လို့ ခံရတယ်ပဲပြောပါ။…….”
သူခိုးကဘယ်တော့မှခိုးပါတယ်လို ၀န်မခံတတ်ပါဘူး..။”
“ကျွန်နော့် အခုပြောနေတဲ့ စကားက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြန်မာပြည်သူ တရပ်လုံး
့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ ကြည့်ရင် အရမ်းကိုသေးငယ်လွန်းပါတယ်။”
့စဉ့် အိုးကြိးကိုကျနော်သံတမန်နည်းနဲ့ ပဲပြန်ယူပါတော့မယ်….“ လို့ 
့တိုက်စားမှုကြောင့် အိုင်စိအက်ဥိးသြဘာ ၊ ဒေါက်တာဂျွန်ဘီိဒင်တို့ လည်း
• ကျုပ် အမေရိက ရောက်နေတဲ့ အကြောင်းကိုနှောင်းလူတွေ ကကောသိကြပါရဲ့ လား
• မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျူပလီဟော ကိုပဲအမျိုးသားပြတိုက်အဖြစ ယနေ့ ထိ
• မြန်မာနိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ တိုက်တန်ညိညွတ်အဆင့် မှိတဲ
အမျိုးသားပြတိုက်ကြိးကော အသစ်တည် ဆောက်ပြိးပြိလား…………..
• မြန်မာတို့ ရဲ့ ဆေးရည်စိမ်ခြင်းအတတ်ပညာကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့ စိတ်ကူးတွေ ကော….
့ကျုပ်ဟာ….တိုင်းတပါးမှာ….ပြည်တော်ပြန်ဘို့ အရေး က……….မရှိတော့ပြိလား။
• ကျုပ်ကမြန်မာ့ သမိုင်းပုဂံရာဇ၀င်မှာကျုပ်ရဲ့ ဘိုးတော်ဘေးတော်တို
့၊ဥိးရိးတော်.. တိုနဲ့အတူကျော်ကြားခဲ့ကြတဲ့ 
• ကျုပ်အသက်ကလည်း ငယ်သေးတဲအပြင် ကျုပ်အသတ်ခံရစဉ်က ကျုပ်နဲ့အတူကျုပ်ကို
စီရင်တဲ့ဆေးရည်စိမ်ခြင်း အတတ်ကိုမြန်မာတို့ရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တ
ဲဒိလောကဓါတ်ပညာကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို အာရုံကို စွဲဆောင်နိုင်စွမ်း ကျုပ်ကို
• စိတ်ကူးလေးများနှောင်းလူတွေထဲ ကတစ်ယောက်ယောက်ပေါ်လာနိုး..
• ကျုပ်ကိုလာခေါ်နိုးနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ….ကျုပ်ရှိနေပါတယ်လို့ …………
• ပြည်တော်ကိုပြန်ဝင်ခွင့်…..ကျုပ်လည်းစောင့်နေပါတယ်………လို့ 
(နှစ်ပေါင်း၇၀၀ကျော်ပေမဲ့ မြန်မာလူမျိုးသန်း၆၀ကျော်နဲ့ သက်ဆိုင်တယ်)
အခုစာတွေကို ..ကိုယ်တိုင်ရေးတယ်လို့.. ယူဆမိပါတယ်.။
အင်္ဂလိပ်အမည်ကို အင်္ဂလိပ်လိုေ၇းပြီး.. မြန်မာစာထဲက.. ပါဠိစာလုံးပေါင်းတွေ အထပ်ထပ်ပြန်စစ်စေလိုပါတယ်..။ အမည်တွေဖြစ်နေလို့ပါ..။
အမေရိကဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း.. ရှာလို့တွေ့ရင် တိတိကျကျ ရေးစေလိုပါတယ်..။ စုံစမ်းပေးစေလိုပါတယ်..။
“သူ့ကို အမိမြေဆီပြန်ပို့ပေးလိုက်ကြတာပေါ့” နော..။
( မြန်မာပြည်ေ၇ာက်မှ.. သမိုင်းမထိမ်းသူတွေလက်ထဲ.. ကမောက်ကမဖြစ်ကုန်ရင်တော့.. မဟာဒုက္ခ)
အခုလိုချီးမြှင့်တဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောကြားပါရစေ…
ဒီပိုစ့် က ရေးတင်တာ..ဧဒင်ဥယျာဉ်မှာတင်ပြီးသားအဟောင်းကြီးပါ..
သတင်းစာက သတင်းတစ်ပုဒ်ကနေ ပြန် မန့် ချင်လာလို့ ..ပုံပြောင်းရေးလိုက်တာပါ။
တင်ပြီးတော့..ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိတာနဲ့ ..ဒါကြောင့်ဖိုရမ်ထဲ မှာဘဲ..နောက်ဆိုစာတင်တော့မယ်….စိတ်ကူးပြီး..ဖိုရမ်မှာတင်နေတာ..(ပွိုင့်လည်းသူကြီးကိုလှူတဲ့ သဘောပေါ့…)
သူကြီးဆီ ကရခဲ့ ရင်လည်း…နာရေးအသင်းပါဘဲ…။
“သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်သူတွေဟာ အဂတိ မလိုက်ရဘူး။
မသိတာကို ဝန်မခံချင်လို့ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ရေးတယ်ဆိုတာမျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်ရဘူး။ ဂတိမလိုက်ဘဲ ရေးသားတဲ့ သမိုင်းစစ်စစ်ကို ရှာပြီး လေ့လာပါလို့ပြောချင်တာ။ သမိုင်းစစ်စစ်ကို သိရင် အချူပ်ကတော့ မအ ဘူးပေါ့။”
စာတွေပြင်ပြီးရင်.. kai@myanmargazette.net အီးမေးလ်ကိုပို့လိုက်ပါနော.။
စာလုံးသတ်ပုံနဲ့.. အခွဲအဖြတ်တွေပါ စစ်ပေးပါနော.။
”တခုတော့ရှိပါတယ် သဂျီး…..သဂျီးပြန်ပို့ ချင်ရင် ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာထိုက်ထိုက်တန်တန် အမျိုးသားပြတိုက်ကြီးဆောက်ပြီးရင် ..ဥပမာ..ပြင်သစ်ကလို အင်္ဂလန်နိုင်ငံကလို ….ဆောက်ပြီးရင်တော့ပြန်ယူနိုင်ပါတယ်..ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဂျူပလီဟော ကချစ်ကြည်ရေးလက်ဆောင်ပါ
သူတို့ ဘာသာအမျိုးသားပြတိုက်လုပ်ထားပေမဲ့အရမ်းကိုသေးငယ်လွန်းပါတယ်။”
လောလောဆယ်..အမတ်ကြီး..အမေရီးကား မှာပဲ အေးဆေးနေပါဦး..လို့ ပြောပါရစေ
မြန်မာတွေရဲ့ဆေးရည်စိမ်နည်း အတတ်..တစ်ဂယ်ဆို..ကျော်ကြား သင့်တယ်နော့်
ဆေးရည်စိမ်အမတ်ကြီး အမေရိကားရောက်နေလို့ တော်သေးတာပေါ့ဗျာ၊ နို့မို့ရင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းခိုးရောင်းသူတွေ လက်ချက်နဲ့ မြဝတီ-မဲဆာက်လမ်း၊ ဒါမှမဟုတ် လားရှိုး-မူစယ်လမ်းကနေ ကိုယ်ပျောက် ထွက်သွားရင် ပြီးပါပြီ။ အခုလိုဆိုရင်တော့ ပြန်တောင်းလို့ ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
မြန်မာ လူမျိုးတို့ ရဲ့ အကြီးဆုံးအားနည်းချက်က ဘာလဲဆိုတော့ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကို အသေအချာ ရေးမှတ်ပေးခဲ့သူမရှိဘူး.. အတတ်ပညာများလည်း အတူတူပဲ …. ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခဲ့ကြတယ်…….. တရုတ်ပြည်မှတ်တမ်းတွေဆိုရင် ဘုရင်တွေ လက်ထက်မှာ ဘုရင့်ရဲ့ နှုတ်က ထွက်သမျှစကားလုံးတိုင်း လုပ်ရပ်တိုင်းကို နောက်ကနေ မှတ်တမ်းတင်ပေးသူရှိတယ် ..
အဲ့ဒီတော့ သူတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကြောင်းအရာများ အားလုံးကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာ သမိုင်းကြောင်းတွေကို နှောင်းလူတွေ သိရတယ်..
ပြီးတော့ သူတို့ တိုင်းပြည်ကို လာရောက်တဲ့ လူမျိုးခြားတွေက်ိုလည်း သေသေချာချာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတယ်….
ပျူလူမျိုးတွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံနဲ့ ကပြဖျော်ဖြေပုံတွေကို တရုတ် နိုင်ငံက သမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ အကျယ်တ၀ံ့ ဖော်ပြထားတာကို ကျမတို့ တိုင်းပြည်က ပြန်လေ့လာခဲ့ ကိုးကားခဲ့ရတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်..
အခုထက်ထိလည်း ထိန်းသိမ်းမှုမှာ အားနည်းဆဲပါ။
ကျမတို့မှာ မော်ကြွားသင့် မော်ကြွားနိုင်ပါရဲ့နဲ့ အခုတော့…. တွေးတိုင်း အားမလိုအားမရစိတ်နဲ့ ၀မ်းနည်းရတယ်..
ဒီစာကို ခုမှပဲ ဖတ်မိတော့တယ်။
မူလအသားအရေအတိုင်း နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော် မပုပ်မသိုး မပျက်မစီးအောင် ဆေးစိမ်ခြင်းအတတ်ကို မြန်မာတွေ တတ်တယ်ဆိုတာကို သိရလို့ အံ့သြဂုဏ်ယူမိပါရဲ့။
အဲဒီပညာတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါရဲ့လားလည်း သိချင်မိပါတယ်။
ရေးသားဖြန့်ဝေပေးလို့ သိရတဲ့အတွက် ရွှေအိမ်စည်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။
အကြံပေးတာပါ.. ရေအိမ်စည်လဲ ရွာအတွက်အတော်လေးပေးဆပ်ခဲ့တာ
ဆေးစိမ်ခြင်းအတတ် ပညာအတွက် စဉ်းစားရင်းနဲ့တောင် ဂုဏ်ယူနေမိတယ်
ဒီလိုသမိုင်းမျိုးကို ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်
အို..ခံစားချက်အစုံပါပဲ..မျက်ဝန်းမှာလည်း မျက်ရည်တွေ ၀ဲလို့ပေါ့…
အဲဒါတစ်ကယ်ဆိုရင် တရားဝင်ပြန်တောင်းသင့်ပါပြီ။ဖြစ်နှိုင်ရင် ကိုရွှေအိမ်စည်ရေ ဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲ
တိတိကျကျလေးဖော်ပြရင်ပိုကောင်းမှာပါခင်ဗျာ။ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟာ မညံ့ကြောင်းပြရမယ့် အချိန်ကောင်း
မရွှေအိမ်စည်နဲ့ သဂျီး ရေ …
မနေ့က သည်စာကို မန့်ထားကြတာတွေ့ပီး စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ ရှာကြည့်တော့
၀ီကီမှာ ဟောသလို တွေ့သဗျ
သူရိယ အယ်ဒီတာ ရေးဖူးတာလည်း ဖော်ပြထားပေမယ့်
အချက်အလက်အားဖြင့် အတော်လေးေ၀၀ါးနေတာတွေ့ရရဲ့…
အလောင်းရဲ့ ရုပ်ဆင်းသွင်ပြင်ကို အသေးစိတ် မှုန်းချယ်ထားသလောက်
အမေရိကား မှာ ဗမာတစ်ယောက် ပြတိုက်တခုမှာ သွားတွေ့တယ်
ဆိုတာကလွဲရင် .. မြို့ တို့ ပြတိုက်နာမည်တို့ မပါတာ ထားဦးတော့
အိစ့်ကိုစ့်လား ၀က်စ်ကိုစ့်လား ဒေါင်းဆောက် လား တောင် မရေရာလေတာ
အတော်လေးတော့ .. မသင်္ကာစရာဗျ….။
နှစ်တွေကြာလွန်းလှပြီ ခုချိန်ထိ အမေရိကား တနံတလျားက မြန်မာတွေ
ဘယ်သူကတော့ ဘယ်မှာ ဘယ်လိုတွေ့လိုက်ပါပြီ ဆိုတာမျိုးလည်း
နောက်တချက် ဆေးစိမ်ထားတာ သီဟသူ ဖြစ်နေတဲ့အချက်..။
စိမ်စရာ ရှားလို့ဗျာ ..အဖေလုပ်တဲ့သူ ရှင်ဘုရင်ကို လုပ်ကြံသူ
သစ္စာဖောက် ကိုများ စိမ်ရသတဲ့ …။ အနှီ နည်းပညာများ ထွန်းကားခဲ့တယ်ဆို
အနော်ရထာ မင်းကြီး ကို စိမ်ပါလား။ ကျန်စစ်သားမင်းကြီးကို စိမ်ပါလား ..
နှောင်းလူတွေ မြင်ဖူးတယ် ရှိအောင် ပြောပါတယ်။
နောက်ပိုင်းခေတ် ဘုရင်တွေ ကြားထဲမတော့ စိမ်တယ် ဆိုတာ မကြားဖူးတော့..။
သည်နေရာမှာ ကွဲလွဲတာ တခုက ရာဇသင်္ကြန် အငြှိုးထား သတ်တယ် လို့လည်း ဖတ်ဖူးသလို
စစ်ပွဲမှာ မြှားသင့် သေတယ် လို့လည်း ရေးကြသေးရဲ့…။
သေချာတာကတော့ သူဟာ လူကောင်းမဟုတ်တာပဲ။
အမတ်ကြီးက သတ်တယ် ဆိုရင်တော့ ဘောက်မဲ့ကြောင့် သမိုင်း ကျန်အောင်
ဆီစိမ်တယ်မသိ ..။ ပစ္စည်းသက်သေ လူသက်သေ ကြီး ကိုနော …။
နောက်ဆုံးသော အချက်က အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ဆွထားတဲ့အချက်ပါပဲ။
ခိုးယူတာမဟုတ် ညံ့လို့ ခံခဲ့ရတယ် တို့ အကောက်ခွန်ကို ဗီလိန် ဇာတ်ချိုးထားတာတို့ ..
နောင်လူကြီးမင်းတို့ တိုင်းပြည်မှာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပြတိုက်ကြီး ဆောက်ပြီးရင် ပြန်ပေးမယ်တို့
ဆိုတာတွေက ဒီ သံသယ ကို ပိုလို့ ပိုလို့ ခိုင်မာစေပါတယ်။
မဟုတ်မှ လွဲရော .. နေရှင်နယ်ဟီးရိုး ပါပါကြီးအူးနေ၀င်း လက်ထက်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့
မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး (၀ါ) အမေဒစ်ကင်န် မုန်းတီးရေး ပရိုပါဂန်းနား ပါးစပ်ရာဇ၀င်လို့သာ
ဒို့မြန်မာတွေ ဆေးစိမ်တဲ့ အတတ်ပညာထွန်းကားတဲ့ခေတ်မှာမှ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာရတာကတစ်ကြောင်း၊
အကောက်ခွန်တွေ လဘက်စားတဲ့အချိန်မှာမှ ပြည်ဝင်ခွင့်ရသွားရှာတာကတစ်ကြောင်း၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မသိခဲ့ဖူးတဲ့ ဗမာပြေကြီးဆိုတာကို ကြက်သီးဖိန်းဖိန်းထသွားရလောက်အောင် ရေးဖွဲ့နိုင်တာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပေမယ့် ရွေးပြီးတော့မှ ဖတ်တဲ့ အဖွက်ဝင်တြောက် အနေနဲ့ ပထမဆုံးဆုကို ပေးလိုက်ပါကြောင်း။
ရွာထဲက သမိုင်းသုသေသနရှင် နန်းမတော် မယ်ပုခ်ျ မသိစေနဲ့ဦး။
ဟိုစာအုပ်ဂျီးနဲ့ကိုင်ပေါက်၊ ဒီစာအုပ်ဂျီးနဲကထုလုပ်နေလို့ ခံနေရဦးမယ်..
ရှုံးလူရင်ထဲ အဲ့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ အက္ခရာရှိနေခဲ့မှန်း
အစောကြီးထဲကသိရင် ပြောခဲ့မိမယ်တောင် မထင်ဘူး
လောလောဆယ်တော့.. ဂီဂီပြောတာ.. သဘာဝကျတယ်ထင်မိတယ်..
ယူအက်စ်ကကျုပ်တို့ကတော့.. အခုထိ.. အထောက်အထားတစွန်းတစလေးတောင်မရ..
တကယ်သာယူအက်စ်မှာရှိနေတာမှန်ရင်.. မြန်မာပြည်ပြန်ယူနိုင်အောင်လုပ်ပေးမယ့်.. လုပ်ပေးနိုင်တဲ့… သူတွေရှိနေတယ်လို့ပဲ.. ပြောချင်ပါတယ်..